ဦးကျော်သူကို ကိုဗစ်ရှိမရှိ ထပ်မံစစ်ဆေးရာ Negative အဖြေထွက်
ဦးကျော်သူကတော့ " N ကွ! ဆိုတော့ မင်းတို့နည်းတူ ငါလည်းဝမ်းသာမိတာပေါ့ကွာ" ဆိုပြီးတော့ ပရိသတ်ကို ဝမ်းသာစရာကောင်းတဲ့ သတင်းလေးပြောပြလာပါတယ်။
လမ်းဘေးမှာတဲထိုးပြီးနေထိုင်ရတဲ့ အဘွားအိုအတွက် အကူအညီပေးခဲ့တဲ့ ပိုပို
ဦးကျော်သူကတော့ ကိုဗစ်ရောဂါ ကူးစက်ခံရလို့ ဝေဘာဂီ မှာ အောက်တိုဘာလ (၂၁) ရက်နေ့ ကတည်းက ဆေးကုသမှု ခံယူခဲ့တာပါ။ အခုဆိုရင်တော့ သူ့ရဲ့ ပထမဆုံး ဆေးစစ်ချက်အဖြေဟာ Negative အဖြေ ထွက်လာပြီလို့ ဝမ်းသာ အားရ ပြောပြလာပါတယ်။
" N ကွ! ဆိုတော့ မင်းတို့နည်းတူ ငါလည်းဝမ်းသာမိတာပေါ့ကွာ။ ဒါပေမယ့် ဒါတစ်သက်လုံး "N" ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိထားဖို့ အရေးကြီးတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ... ငါ ဒါလေးရေးပေးလိုက် တယ်။ဝမ်းသာတယ်ဆိုပြီး အပျော်မကြူးကြနဲ့ ၊ မပေါ့ကြနဲ့။ လွတ်လပ်ပြီဆိုပြီး လမ်းမထွက် ဆေးရိုးလှမ်းကြသလိုဖြစ်ကုန်မယ်။ သတိ! အသိ! အမြဲ ရှိ! ကျော်သူ( ခေတ္တ ဝေဘာဂီ)" ဆိုပြီးတော့ အောက်တိုဘာလ ၂၆ ရက်နေ့ ညနေ (၅) နာရီ ကျော်က သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာမှာ ရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဦးကျော်သူဟာ နှလုံး ခွဲစိတ်ထားသူဖြစ်ပြီး ဆီးချိုရောဂါ ရှိတဲ့အတွက် ကိုဗစ်ရောဂါ ကူးစက်ခွလိုက်ရတဲ့ သူ့ကို နာရေးကူညီမှု အသင်းသားတွေ၊ ပရိသတ်တွေကလည်း စိုးရိမ်နေခဲ့ကြတာပါ။ အခုဆိုရင်တော့ သူ့ရဲ့ ဆေးစစ်ချက် အဖြေမှာ Negative ဖြစ်တဲ့ အတွက် မိသားစုဝင်တွေ၊ အနုပညာလောကသားတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေကလည်း ဦးကျော်သူအတွက် ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရတယ်ဆိုတာကို Comment မှာ ရေးသားခဲ့ကြပါတယ်။